အရေပြားမှာ ဖြစ်ပေါ်တက်သောရောဂါများအကြောင်း - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အရေပြားဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံးနေရာယူထားတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သလို ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကလည်း စုံလှပါတယ်။
?အရေပြားရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေက ဘာတွေလဲ ??
– မှိုကြောင့် ညှင်း၊ပွေး၊ခြေဝဲစားခြင်း..စတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လိမ်းဆေး၊ သောက်ဆေးတွေရှိပေမဲ့ ကုသချိန်ကြာတတ်ပြီး ချက်ချင်းမပျောက်နိုင်လို့ စိတ်ရှည်ရှည်ကုဖို့လိုပါတယ်။
ရေယုန်၊ ရေကျောက်၊ ကြွက်နို့၊ ကလေးငယ်တွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ hand foot and mouth disease (HFMD) လို ရောဂါတွေ အဖြစ်များပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို မြန်မြန်နှိမ်နင်းနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ခံအားစနစ်မြှင့်တင်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဝက်ခြံ၊ ပြည်တည်နာ၊ အနာပဆုပ် စတာတွေ အဖြစ်များပြီး တခြားအရေပြားပြဿနာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ပဋိဇိဝသောက်ဆေး လိမ်းဆေးတွေနဲ့ ကုသရပြီး သေချာမကုရင် ဆေးယဉ်ပါး ဆေးမတိုးတဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဝဲစွဲတာ အပြင် သန်း၊လှေးစတဲ့ အကောင်တွေတွယ်ကပ်ပွားများနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပြီး တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအားနည်းသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မတည့်တဲ့ အစားအသောက်၊ အလှကုန်၊ ဆေးဝါး စတာတွေ သုံးစွဲမိရင်နဲ့ ပိုးမွှားအကောင်တစ်ခုခုကိုက်ခံရချိန်မျိုးတွေမှာ အရေပြားမှာ ယားယံလာတာ ၊ အပိမ့်ထလာတာ ၊ ကုတ်လိုက်ရင် အင်ပျင်ထလာတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
နှင်းခူလို အရေပြားရောင်ရမ်းတာကို အခြေခံတဲ့ရောဂါမျိုးတွေ၊ ဆိုရီရေးစစ်ရောဂါလို နာတာရှည်အရေပြား ယားယံရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါမျိုးတွေ ပါဝင်ပြီး ရေရှည်ကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ရောဂါမဟုတ်ပေမဲ့လည်း ဒိုင်ပါလောင်ခြင်းလို အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
? ဘာအရေပြားရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနဲ့ မကုတ်မိအောင် သတိထားထိန်းသိမ်းဖို့ပါပဲ။
ကုတ်ရာကနေတစ်ဆင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးထပ်ဝင်သွားပြီး ပြည်တည်နာတွေဆက်ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ပါ။
? ရောဂါတော်တော်များများမှာတော့ ယားယံတာ တွဲဖြစ်တတ်ပေမဲ့ ညှင်းလို ရောဂါမျိုးမှာတော့ ယားယံလေ့မရှိပါဘူး။
ဒါ့အပြင် အရေပြားပေါ်မှာ ပြတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေက တော်တော်များများ ခပ်ဆင်ဆင်တူနေတတ်တာမို့ ရောဂါနာမည်တပ်ရ ခက်လှပါတယ်။
ဒီတော့ အရေပြားမှာ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင် တစ်ပါတ်ကျော်တဲ့အထိမပျောက်ရင် ဆရာဝန်ပြဖို့လိုပါတယ်။